Ny fampiharana fakana sary dimy tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny iray amin'ireo zavatra ataontsika indrindra amin'ny finday Android dia ny maka sary. Misy ireo mpampiasa mitady telefaona misy fakan-tsary mahafinaritra, hahafahana maka sary tsara indrindra amin'ity fomba ity. Amin'ny tranga maro, miaraka amin'ny rindranasa ho an'ny fitaovana, afaka manatsara ny sasany na mahazo asa fanampiny isika. Noho io antony io dia hiresaka momba an'ity karazana fampiharana eto ambany ity izahay.
Avelanay eto ambany ianao miaraka amin'ny safidin'ny fampiharana fakana sary tsara indrindra azontsika alaina ho an'ny Android. Amin'izany fomba izany dia hahafahanao mahazo sary tsara kokoa amin'ny findainao amin'ny fomba tsotra. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
Ny lisitr'ireo rindranasa ireo dia somary miovaova, noho izany dia mety hanampy amin'ny fampiasana na toe-javatra samihafa. Ka manantena izahay fa hitanareo fa mahasoa izy ireo. Ireo rindranasa rehetra resahina azo sintonina mivantana avy ao amin'ny Play Store.
2 Fakan-tsary Pro Moment
Atombotsika amin'ny lisitra iray amin'ireo fampiharana matihanina indrindra hitanay ny lisitra. Tsy fampiharana izay hanampy antsika haka sary, fa hanome fanazavana be dia be momba ny fakantsary sy ny fikirakirana azy io. Afaka mahita ny angona tahak'izany ny halaliny, ny zoro, ny halavirana, ny hazavana ... Ireo karazana data rehetra izay tena ilaina tokoa rehefa maka sary. Arakaraka ny toe-javatra na amin'ny toe-javatra tsy mahazatra. Noho io fampahalalana io dia afaka manamboatra ny fakantsary isika ary maka ny sary tsara indrindra azo atao amin'izany fotoana izany.
Fakan-tsary Pro Moment
Faharoa, mahita rindrambaiko ahafahantsika maka sary izahay. Misaotra azy mahazo fiasa fanampiny izay tsy ananantsika amin'ny fakantsary mahazatra isika avy amin'ny telefaoninay. Amin'izany fomba izany dia afaka manana safidy bebe kokoa isika ary maka sary amin'ny fomba hafa na amin'ny toe-javatra vaovao. Manome antsika ny fahafaha-maka sary amin'ny endrika sy toe-javatra maro, toy ny endrika RAW. Ankoatry ny famelana antsika hanana fifehezana lehibe amin'ny fomba fakantsika sary amin'ny finday. Noho izany dia rindranasa izay mety hahaliana ny mpampiasa maro izy io.
Ny fandefasana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android dia mitentina 1,49 euro. Ho takalon'ny fandoavana an'io vola io dia tsy mahita fividianana na dokam-barotra karazana ao izahay.
Ny fampiharana fahatelo ao amin'ilay lisitra dia tsy ilay mpanonta sary mahazatra izay hitantsika betsaka ao amin'ny Play Store. Izy io dia fampiharana fanovana sary izay ahafahantsika manafoana ny kileman-toetra kely Amin'ireo sary. Rehefa miteny isika fa tsy fahalavorariana dia miresaka lafin-javatra toy ny tariby, fiara, bisikileta na tasy eo amin'ny rindrina isika. Tsipiriany madinidinika izay rehefa esorina dia ahitantsika ny sary feno sy tonga lafatra indrindra. Noho ity fampiharana ity dia ho tsotra kokoa noho ny mahazatra ity asa ity. Izy io dia manana interface tsara, izay manamora ny fampiasana azy.
Ny fandefasana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android dia mitentina 1,49 euro. Noho io fandoavam-bola io dia tsy manana mividy na dokam-barotra ao anatiny izahay.
Developer: ADVA Malemy
Eo amin'ny toerana fahefatra dia mahita rindranasa izay toa hain'ny ankamaroanao ianareo. Mijoro eo aloha isika iray amin'ireo mpamoaka sary tsara indrindra ho an'ny Android, ankoatry ny safidy malalaka, izay tsy mahazatra amin'ity karazana fampiharana ity. Misongadina indrindra izy amin'ny maha-marobe azy, satria azontsika ampiasaina amin'ny karazana tranga rehetra, na amin'ny fanontana tsotra sy tsotra, ho an'ireo matihanina hafa. Izany no mahatonga azy ho fampiharana mahaliana toy izany, ary maninona no apetraka amin'ny telefaona. Azo atoro tanteraka.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android, araka ny efa nolazainay taminao. Ho fanampin'izany, ao anatiny dia tsy manana fividianana na dokam-barotra isan-karazany isika.
Fampiharana iray izay fantatry ny ankamaroanao mazava tsara fa ilay manidy ity lisitra ity. Izy io dia fampiharana izay Miasa amin'ny maha-mpamoaka sary sy fakan-tsary ho an'ny telefaona anao. Azontsika atao ny maka sary miaraka aminy, fa afaka manova ny sary ihany koa izahay ary manampy effets vitsivitsy ho azy ireo. Izy io dia fampiharana izay fantatry ny maro satria ampiasain'izy ireo handefasana sary ao amin'ny Instagram. Manome antsika vokatra tsara ho an'ity karazana sary ity izy, ary ny marina dia fampiharana tsotra tsotra ampiasaina izy io. Noho izany, safidy tsara ny mandinika raha mitady rindranasa izay manome anao fampiasana maro ianao ary mamela anao hanararaotra ny fakantsary findainao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika. Raha te hampiasa azy io amin'ny asany rehetra izahay, dia manana famandrihana isan-taona. Na dia tokony hoheverinao aza ny fampiasana dia hataonao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » sary » Ny fampiharana sary tsara indrindra ho an'ny Android
Vivo handefa ny Vivo V11 amin'ny 6 septambra any India